Komishanka Doorashooyinka Somaliland oo kala diray shaqaalihii Diiwaangalinta iyo Kaadh bixinta |
Komishanka Doorashooyinka Qaranka Somaliland ayaa lagu waramayaa inay doraad mar kale kala direen shaqaalihii ka hawl-galay Diiwaangalinta iyo Daabacaad Kaadhadhka, illaa iyo inta Doorashada wakhtigeeda ay gaadhayso.
Shaqaalaha la kala diray oo gaadhaya dhawr iyo Afartan qof ayaa lagu war-galiyey in marka loo baahdo dib loogu yeedhi doono, isla markaana la siin doono shahaado sharaf qof kasta lagu maamuusi doono, si loogu tixgaliyo.
Komishanka Doorashooyinka ayaa shaqaalahan dib ugu qaatay Daabacaada kaadhadh, isla markaana doonayey inay ka qayb qaataan qaybintooda, maadaama qaybinta danbe-na u baahan tahay hawl aan ka yarayn tii Diiwaangalinta ee ay ka soo shaqeeyeen.
Golaha Guurtidda ayaa laga sugayaa toddobaadkan soo socda inay go’aan ka gaadhaan muddo kordhinta ay awooda Dastuuriga ah u leeyihiin, taasoo suurtogal ay noqon karto in ay ka badato wakhtigii lagu heshiiyey in la qabto oo 10, bisha December ee sanadkan 2017-ka.
Lama oga mudada rasmiga ah ee ay Golaha Guurtiddu u astayn doonaan qabsoomida Doorashada hase yeeshee waxa la filayaa inay laalaan go’aamaddii ay sadexda Xisbi iyo xukuumaddu ku soo Heshiiyeen.
Golaha Guurtidda ayaa laga filayaa inay Doorashada Madaxtinimada wakhti kooban ku daraan, hase yeeshee waxay u arkaan in go’aamaddii kale oo codsiga korodhsiimada ku lamaanaa ay sharci daro ku tilmaamaan, maadaama aan golayaasha qaarkood wakhtigoodii dhamaan.
Qaadhaan-bixiyayaasha ayaa laga yaabaa inay mar kale cadho ka muujiyaan go’aamadda Golaha Guurtidda, haddii ay dib uga ridaan mudadii lagu Heshiiyey, hase yeeshee Komishanku waxay u muuqdaan in aanay dan ka lahayn Qaadhaan-bixiyayaasha.